Ny lafiny fahasalamana, ny angovo, ny fambolena ary ny fanabeazana no tena ho votoatim-piaraha-miasan’ny roa tonta manomboka izao raha ny tatitra avy amin’ny seraseran’ny prezidansa. Nampahafantarina tamin’izany fa hisy atsy ho atsy ny masinina fitiliana homamiadana hanampian-dry zareo indianina antsika entina hiadiana amin’ity aretina mahafaty ity. Hisy koa ny injeniera miisa 2 hanome fiofanana momba ny fampiasana ireny fitaovana fisarihana angovo amin’ny alalan’ny herin’ny masonadro ireny ho an’olona miisa 600 hatramin’ny fiafaran’ny taona 2019. Hisy injeniera miisa 2 toy izany koa ho avy hanampy antsika amin’ny fampiofanana momba ny fambolena. Noraisin’ny filoham-pirenena, Andry Rajoelina, taorian’izay koa moa ny ambasadaoro vaovaon’i Polaonina miasa eto amintsika, Jacek Bazanski. Ho azy ireo indray kosa dia ny hanitatra ny fiaraha-miasa eo amin’ny tontolon’ny famokarana lavanila no tena mahaliana azy. Mieritreritra ny hanampy amin’ny alalan’ny famatsiana milina ilaina amin’ny fambolena koa anefa izy ireo, raha ny tatitra voaray hatrany.